मंगलबार राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा बानेश्वरको गाईजात्रा सम्पन्न भएको छ । रेडियो अडियोको आयोजनामा भएको गाईजात्रामा देशका चर्चित हाँस्यकलाकारहरुको सहभागिता रहेको थियो । आफ्नो प्रस्तुतीले उपस्थित दर्शकहरुलाई कलाकारहरुले मनोरञ्जन गराएका थिए । हाँस्यकलाकारहरुको उपस्थिती रहेको कार्यक्रममा निर्देशक तथा निर्मात्री दीपाश्री निरौला र निर्माता दीपकराज गिरीको पनि...
रेखा थापा प्राय चर्चामा आईरहने नायिका हुन् । पछिल्लो समय उनको आफ्नो ब्यानरमा बनेको कार्तिक २ मा प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘रुद्रप्रिया’ को कारणले उनी चर्चामा थिईन् भने अहिले उनको चर्चाको प्रसङ्ग बदलिएको छ । केहिदिन अघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटेपछि सामाजिक सञ्जालमा रेखा थापा र कोमल ओलीलाई लिएर अनेक किसिमका ट्रोलहरु बनिरहेका छन् । यस्तैमा नायिका रेखा थापा...
अशोक शर्माले भने-‘मलाई हलवालाहरुबाट धम्की आयो’
कार्यक्रम थियो, चलचित्र ‘हुर्रे’ घोषणाको । बोल्ने पालो आयो, डीसीएनका अध्यक्ष अशोक शर्माको । डीसीएनले अहिले चलचित्रको वितरणको काम पनि गर्दै आएको छ । अशोक शर्मालाई चलचित्रको यूनिटले शुभकामना दिनका लागि निम्त्याएको थियो । तर, शर्माले छोटो शुभकामना पछि सुरुवातमा हलवालाहरुमाथि आक्रोश पोखे । उनले, चलचित्र क्षेत्रको हिसाब पारदर्शी नभएको भन्दै सबैलाई पारदर्शी भएर काम...
“ह्याप्पी न्यु ईयर”को टिजर रिलिज, देखियो लोभलाग्दो अस्ट्रेलिया
देवकुमार श्रेष्ठ निर्देशित नेपाली फिल्म ‘ह्याप्पी न्यु ईयर’को हालैमा रिलिज डेट र टीजर सार्वजनिक गरिएको छ । अस्ट्रेलियामा सम्पूर्ण छायाँकन गरिएको यो फिल्ममा अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१८ को अवसर पारेर पुष १४ गते (२९ डिसेम्बर)मा रिलिज हुने निर्माता रती थापाले जानकारी दिए । सार्वजनिक फिल्मको टीजरमा अष्ट्रेलियाका रमणीय दृश्यहरु कैद गरिएको छ । लभस्टोरी कथामा निर्मित...
निर्माण घोषणा भएदेखी नै चर्चामा आएको चलचित्र ‘रुद्रप्रिया’ को पहिलो गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । केहिदिन अघि अडियो मात्र सार्वजनिक भएको ‘चिरबिर चिरबिर चाँचरी…’ बोलको गीतको भिडियो पनि आज सार्वजनिक भएको हो । यस गीतलाई संगितकार राजनराज शिवाकोटीले आफै गाएका छन् भने मेलिना राईले उनलाई साथ दिएकी छिन् । साथै कोरशमा राजनराज शिवाकोटीकी छोरी गृष्मा शिवाकोटीको...
युटुबमा चर्चित बनेको ग्रुप ‘कार्टुन्ज क्रु’लाई फिचरिङ गरेर एक म्यूजिक भिडियो तयार भएको छ । ‘जता जता पिरतीको बाटो’ बोलको गीतलाई ‘तिमीलाई देखेपछि आइ लभ यू’ बोलको गीतको सिक्वेल बताइएको छ । शुभ मिडिया होमको प्रस्तुति रहेको गीतमा सरोज ओलीको स्वर छ । गीतमा दिनेश थपलियाको शब्द तथा र बसन्त सापकोटाको संगीत छ । यो भिडियोमा संजय लामाको छायांकन छ । पोखराका रमणीय...
पल शाह र पुजा शर्मा स्टारर चलचित्र ‘म यस्तो गीत गीत गाउँछु’ तेश्रो सातामा पनि राम्रो ब्यापार गरिरहेको छ । चलचित्रका निर्माता तथा निर्देशक सुदर्शन थापाका अनुसार चलचित्र अझै पनि काठमाण्डौँका मुख्य मुख्य हलहरुमा लागिरहेको छ । निर्देशक थापाका अनुसार चलचित्र अझै पनि क्युएफएक्स, एफक्युब, गोपिकृष्ण, गुण, अष्टनारायण, बाराही सिनेमा पोखरामा भब्यताका साथ प्रदर्शन...
‘प्रेम गीत -२’ ले निकै आक्रमक कारोबार गरेको छ । पहिलो दिन देशभरिका ८० पर्दाबाट १ करोड १३ लाख ५६ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ कारोबार गरेको फिल्मले दोश्रो दिन १ करोड ४० लाख २५ हजार ६ सय ८७ रुपैयाँ कलेक्सन गर्दै कूल २ करोड ५३ लाख ८२ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ ग्रस कारोबार गरेको छ । शनिबार फिल्मले मोफसल तर्फ ६४ लाख ११ हजार २ सय १५ रुपैयाँ र राजधानी टेरिटोरीबाट ७६ लाख १४ हजार ४ सय ७२ रुपैयाँ...
निश्चल'दुई रुपैयाँ'को पछि, 'हैट'बुढिको ब्वाईफ्रेन्ड खोज्दै!
चलचित्र'दुई रुपैयाँ'को ट्रेलर रिलिज भएको छ। काठमाडौँमा बिहिवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि ट्रेलर रिलिज गरिएको हो। युटूबमा हाईलाईट्स नेपालले ट्रेलरको अधिकार प्राप्त गरेको छ। 'कुटुमा कुटु' बोलको गीतले चलचित्रको हाईप यसअघि बढाईसकेको थियो। ट्रेलरमा वुद्धि तामाङ, मेनुका प्रधान, निश्चल बस्नेत, स्वस्तिमा खड्का,असिफ शाह लगायतका कलाकारहरु देखिएका छन् । तर यो...
गत शुक्रबार रिलिज भएको ‘ए मेरो हजुर २’ को ट्रेलर पहिलो स्थानमा पुगेको छ । ५ दिनसम्म ‘छक्का पन्जा २’ को गीतले रोकेर राखेको चलचित्रको ट्र्रेलर आज बाट नेपालको युट्युब ट्रेन्डिङको पहिलो नंबरमा पुगेको हो । ट्रेन्डिङको पहिलो नंबरमा पुग्दा पनि यसको भ्यु भने ‘छक्का पन्जा २’ को गीतभन्दा कम भ्युवर पाएको छ । यद्यपी चलचित्रको ट्रेलर २४ घण्टामा अहिलेसम्म धेरै हेरिने...
चलिचित्र ‘लुट’ मार्फत नेपाली सिने नगरीमा निर्देशकको रुपमा डेब्यु गरेका निश्चल बस्नेतले आफुले चलचित्र ‘लुट २’ राम्रो बनाउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । २०१२ मा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘लुट’ले नेपाली सिने उद्योगमा एउटा कोसेढुङ्गा सावित भएको थियो । मानिषहरुले ‘लुट’ भन्दा अघिको चलचित्र र ‘लुट’ पछिको चलचित्र भनेर तुलना गरिसकेका छन् । तर ‘लुट २’ मा दर्शकहरु...
‘ग्याङस्टार ब्लूज’बाट ‘स्टार’ बन्ने दौडमा आशिरमान
स्टार बन्नका लागि धेरै चलचित्र खेल्न आवश्यक छैन । कतिपय कलाकार त एउटै चलचित्रबाट नै स्टार बनेका छन् । कतिपयलाई दर्जनौ चलचित्र खेल्दा पनि फाप्दैन । नव-नायक आशिरमान देशराज जोशी पनि अहिले पहिलो चलचित्रबाट नै स्टार बन्ने दौडमा छन् । आशिरमान देशराज जोशीले अभिनय गरेको चलचित्र ‘ग्याङस्टार ब्लूज’ भदौ २ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । यो चलचित्रका लागि आशिरमानले निकै मिहिनेत पनि गरेका...
श्रीमान निर्देशक,श्रीमति निर्माता ! बन्ने भो 'आउँदै जाँदै'
पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीले फिल्म निर्माणमा हात हालेकी छिन् । उनको लगानीमा अब 'आउँदै जाँदै' नामक फिल्म बन्ने पक्का भएको छ । आईतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि फिल्मको घोषणा गरिएको हो । उनले बनाउन लागेको फिल्मको नाम हुनेछ "आउँदै जाँदै" । आज भन्दा १७ वर्ष अघि अर्थात सन् २००० की मिस नेपाल उषाले आफुले बनाउने फिल्म राम्रो हुने बताईन् । फिल्मको निर्देशन उनकै पति...